असार १० मंगलवार
युके एफ.एम (धनराज श्रेष्ठ )
उदयपुर– कटारीमा महिलाको रहस्यमय मृत्यु पश्चात उनका श्रीमान पक्राउ परेका छन ।
कटारी नगरपालिका ७ देउलीकुनाको जङ्गलमा असार ३ गते घाइते अवस्थामा फेला परेकी महिलाको मृत्यु भएपछि सोमबार उनका श्रीमान मिन वहादुर दर्लामी मगर लाई पक्राउ गरिएको हो ।
कटारी ७ देउलीकुना घर भएकि ४५ वर्षिय गम्भिर घाइते चित्र कुमारी दर्ला्मि मगरको उपचारको क्रममा असार ३ गते विराटनगरमा मृत्यु भएको थियो । उनलाई देउलीकुना नजिकैको जङ्गलमा घाइते अवस्थामा फेला पारि उपचारका लागि कटारी अस्पताल ल्याइएको पारिवारिक श्रोतको भनाइछ । यहा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि विराटनगर लगिएको र उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ । गाउका केहि व्यत्तीले जङ्गलमा घाँस दाउरा गर्न जादा भिर बाट लडेको बताएका छन । तर इलाका प्रहरी कार्यलय कटारीका प्रमुख प्रेमसागर के.सी. का अनुसार घाइते अवस्थामा फेला परेको स्थानमा कुनै लड्ने खालको भिर पहरा नरहेको बताइएको छ ।
यता माइति पक्ष र छिमेकिको भनाइ अनुसार श्रिमानकै कुटपिट बाट मृत्यु भएको भनिएको छ ।
महिलाको मृत्यु पश्चात उनका श्रीमान मिन वहादुर दर्लामी मगरलाई असार ९ गते सोमवार इलाका प्रहरी कार्यलय कटारीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनलाइ जिल्ला अदालत बाट म्याद थप गरि अनुसन्धान सहितको आवश्यक कार्वाहि अगाडि बढाइएको प्रहरी प्रमुख के.सी. ले जानकारी दिनुभएको हो ।